Sary moto sy motera ho an'ny Android | Androidsis
Ho an'ireo tia ny tontolon'ny motera dia eto ianao no hahita ny sary miavaka indrindra eny an-tsena. Ny fiara hazakaza-piara tsara indrindra na ny sary mahavariana indrindra an'ireto fiara misy kalitao avo indrindra ireto ho an'ny telefaona Android anao maimaimpoana. Ovay toy izao ny fisehon'ny telefaonanao.
Ianao ve mitady sary an-tsary miaraka amin'ny fiara Ferrari na Porsche tsara indrindra? Tadiavo ny lafika tsara indrindra ao amin'ity galeriana ity ary safidio ny background mety indrindra amin'ny telefaona Android anao.
Sintomy mora foana ny tsara indrindra sary moto sy fiara ho an'ny Android-nao. Ataovy amboary ny findainao na ny takelakao amin'ny iray amin'ireo fiara izay ho hitanao amin'ireto karazana sary mofomamy manaraka ireto ho an'ireo tia lasantsy.
Te hahita azy ireo ve ianao tsara indrindra wallpapers? Aza adino ny fizaran-tsary izay ho hitanao ao amin'ilay rohy izay navelanay fotsiny.